Kuipa Kwaita Uori Hwehurumende Uye Kushandisa Simba Zvisiri Izvo
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bulgarian Cakchiquel (Western) Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Chiyao Chokwe Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mixe (North Central) Mongolian Moore Nahuatl (Central) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Runyankore Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Venda Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Uori hwehurumende hunorondedzerwa sekushandisa simba zvisiri izvo kunoitwa nevashandi vehurumende kuti zvinakire ivo chete. Uori hwakadaro hwakatanga kare. Somuenzaniso, Bhaibheri rine mutemo unorambidza kutambira pfumbamuromo pakutonga nyaya, zvichiratidza kuti uori hwakanga hwava kutoitwa makore anopfuura 3 500 adarika. (Eksodho 23:8) Asi kuita uori hakusi kutambira chiokomuhomwe chete. Dzimwe nguva vashandi vehurumende vane uori vanoba zvinhu, mari, kana kuti vanoitirwa mabasa avanenge vasina kodzero yokuitirwa. Vanogonawo kushandisa chinzvimbo chavo zvisina kukodzera kuti vabatsire hama neshamwari.
Kunyange zvazvo uori huchigona kuitwa mumasangano akasiyana-siyana, zvinoita sokuti hurumende ndidzo dziri pamberi. Muna 2013, sangano reTransparency International rakati munyika yose vanhu vanoona sokuti kune masangano mashanu ari pamberi panyaya dzeuori. Masangano acho ndeanoti, mapato ezvematongerwo enyika, mapurisa, vemuhurumende vanoshanda nevoruzhinji, matare anodzika mitemo, uye matare edzimhosva. Ona mienzaniso inotevera inoratidza kukura kwaita dambudziko iri.
AFRICA: Muna 2013, kuSouth Africa, vashandi vemuhurumende vanoshanda nevoruzhinji vanenge 22 000 vaipomerwa kuti vakaita uori.
AMERICAS: Muna 2012, kuBrazil, pane vanhu 25 vakabatwa nemhosva yekutsvaka rutsigiro mune zvematongerwo enyika nemari yaifanira kubatsira veruzhinji. Mumwe wacho akambova mukuru wevaishanda muhofisi yemutungamiriri wenyika, ari wechipiri kubva kumutungamiriri wenyika.
ASIA: Muna 1995, vanhu 502 vakafa muguta reSeoul kuSouth Korea, pakadonha chimwe chivako chezvitoro. Vaferefeti vakaona kuti vakuru vakuru veguta vainge vapiwa chiokomuhomwe kuti vabvumire vaivaka kushandisa kongiri isina kusimba uye kuti vasatevedzera mavakiro avaifanira kuita.
EUROPE: Gurukota Rinoona Nezvemukati Menyika musangano reEuropean Commission, Cecilia Malmström akati, “[Zvaita uori muEurope] zvinoshamisa.” Akawedzera kuti, “zvinoita sokuti vezvematongerwo enyika hapana chavari kuita chinoratidza kuti vanoda kupedza uori.”
Uori hwehurumende hwadzika midzi. Muzvinafundo Susan Rose-Ackerman, uyo anoongorora nezvekupedza uori, akanyora kuti kupedza uori kunotoda “kuti hurumende inyatsochinja maitiro ainoita zvinhu.” Kunyange zvazvo zvingaita sokuti uori haufi hwakapera, Bhaibheri rinoratidza kuti zvinokwanisika uye kuti pane zvimwe zvikuru zvichatochinja.